English / .Somali
Iyadoo bayolojiya ahaan laga hadlayo, koridda benii aadamku waxay ka bilaabataa kulanka unugyada labka iyo dheddiga, marka naagta iyo ninku midkoodba isu geeyaan 23 kormosoomyadooda iyadoo loo marayo kulanka unugyadooda taranka.
Naagta unuggeeda taranka waxa sida caadiga lagu magacaabaa "ukun" laakiin magaca saxa ah waa "uusayt".
Sidoo kale, unugga taranka ninka waxa aad loogu yaqaan "isberm" laakiin magaca la doorbido waa isbermatosoon.
Kaga soo deynta uusayt naagta ukumo-galeenkeeda falgal la yiraahdo ukumeyn kadib, ayaa uusayt iyo isbermatosoon isugu tagaan dhuumaha minka middood, oo badanaa la yiraahdo dhuumaha Fallobian-ka.
Dhuumaha minka waxay isku xiraan naagta ukumo-galeenkeeda Iyo minkeeda ama makaankeeda.
Embriyaha hal-unuglaha ah oo ka soo baxa waxa la yiraahdaa saygoot, macnaheedu "isku xakameysaan ama xiran".
46da kromosoom ee saygood-ka waxay mettelayaan sameyska koowaad u gaarkaa naqshad fireedda aasaasiga oo dhammeystiran ee ruuxa cusub. Qorshaha weyn wuxu ku jiraa moleekule-yaal si adag isugu-marooqsan la yiraahdo DNA. Waxay wadaan tilmaamaha koritaanka ee dhammaan jirka.
Moleekuleyaasha DNA-ga waxay u egyihiin jaranjaro marooqsan loo yaqaan galool lammaanan. Marooqyada jaranjarada waxay ka sameysan yihiin moleekule lammaanane ah, ama salal,lagu magacaabo gu'anayn, saytosayn, adenayn, iyo thaymiin.
Gu'anayn waxay ku lammaansantaa saytosayn oo keliya, adenayn-na thaymiin. Unug kasta ee benii aadan waxaa ku jira taqriiban 3 bilyan ee lammaanayaashaan salka ah.
DNA-ga halka unug wuxu sidaa warbixin aad u farabadan oo haddii lagu metteli lahaa erayo daabacan, iyadoo un la taxayo xarafka koowaad ee sal walba waxa loo baahan lahaa 1.5 milyan oo bogag qoraal ah!
Haddii la fidiyo min dhammaad ilaa dhammaad, DNA-ga halka unug benii aadam cabbirkiisu waa 3 1/3 cag ama 1 miter.
Haddaan kala furfuri lahayn dhammaan marooqyada DNA-ga ee 100 trilyan unug ee qaangaarka, waxay ku fidsami lahayd 63 bilyan ee mayl. Masaafadu waxay gaareysaa min dhulka illaa qoraxda iyo soo noqod 340 jeer.
Taqriiban 24 illaa 30 saacadood kulanka unugyada lalka iyo dheddiga ka-dib, saygoot-ku wuxu dhammeystirayaa kala qaybsamidda unugga koowaad. Iyadoo loo marayo hawlgalka maytosis, halka unug wuxu u kala qaybsamaa labo, labadu afar, sidaas bayna u socotaa.
Ugu horreyntii 24 illaa 28 saac kulanka unugyada labka iyo dheddiga kadib, ayaa uurka la xaqiijin karaa iyadoo laga arko hormoon lagu magacaabo "cunsurka hore ee uurka" dhiigga hooyada.
3ta illaa 4ta maalmood kulanka unugyada labka iyo dheddiga kadib, unugyada kala qaybsamaya ee embriyaha waxay qaadanayaan qaab goobaabin embriyahana waxa lagu magacaabaa morula.
4ta illaa 5ta maalmood, god ayaa ka sameysma kubbadda unugyada gudaheeda embriyahana waxa kolkaa lagu magacaabaa blastosist.
Unugyada gudaha blastosist-ka waxa lagu magacaabaa cufka unugga gudaha hoose waxana ka soo baxa madaxa, jirka, iyo qaabab kale muhiim u ah beenii aadamka koraya.
Unugyada ku jira cufka unugga gudaha hoose waxa lagu magacaabaa unugyada jirridda ee embriyaha waayo waxay karti u leeyihiin inay sameeyaan midkasta ee noocyada unug ee 200 ka badan ah ku jira jirka benii aadamka.
Kolka u hoos ugu safro dhuunta minka kadib, Embriyihii bilowga ah wuxu isku dhejiyaa minka hooyada darbigiisa gudaha hoose ah. Hawlgalkan, lagu magacaabo ku tallaalmid Waxay bilaabataa maalinta 6da waxayna dhammaataa 10-12 maalmood kulanka unugyada labka iyo dheddigga kadib.
Unugyada embriyaha koraya ayaa waxay sameynayaan hormoon lagu magacaabo human koriyonik gonadotorobin, ama HCG,oo ah walaxa lagu arko badanaa baaritaannada uurka badankooda.
HCG wuxu ku amraa hormoonnada hooyada inay joojiyaan meerteysiga caadiga ah ee caadada, taasoo u oggolaaneyo uurku inuu sii socdo.
Ku tallaalmidda kadib, unugyada dhanka dibedda xiga ee blastosist waxa ka soo baxa qayb qaab lagu magacaabo mandheer, oo ka dhex shaqeysa qaababka wareegga dhiigga ee hooyada iyo embriyaha.
Mandheertu waxay gaarsiisaa oxygen, nafaqo, hormoonno, iyo daawooyin ee hooyada benii aadamka koraya; waxay bixisaa soo-saarka qashinka ah; waxayna horistaagtaa in dhiigga hooyadu ku qasmo dhiigga embriyaha iyo uurjiifka.
Mandheertu waxay kaloo soo saartaa hoormoonno waxayna ku haysaa kulka jirka embriyaha ama uurjiifka wax in yar ka sarreeya kan hooyada.
Mandheertu waxay la leedahay benii adam koraya isgaarsiin mareysa xididdada xarigga xuddunta.
Kartida taageeridda nalosha ee mandheerta waxa la tartamaan kuwo qaybaha xannaanada sare oo deg-degga ee isbitaallada casriga.
Usbuuca 1da, unugyada cufka unugga guda hoose waxay sameynayaan labo lakab lagu magacaabo hayboblast iyo ebiblast.
Haypoblast waxa ka soo baxa koleyga nafaqada, oo ka mid ah qaababka ay mariso hooyadu nafaqada ay siinayso embriyaha bilowga ah.
Unugyada ebiblast waxay sameeyaan xuub lagu magacaabo amniyon, oo gudihiisa embriyuhu dabadeedna uurjiifku ku kooraan illaa dhalashada.
Taqriiban 2 1/2 usbuuc, ebiblast wuxu sameeyay 3 cuf-ungyo oo takhassus leh, ama lakabyo dhala xubno, lagu magacaabo ectoderm, endoderm, iyo mesoderm.
Ectoderm waxa ka soo baxa qaabab badan ay ka mid yihiin maskaxda, xarigga lafdhabarta, dareemeyaasha, maqaarka, ciddiyaha, iyo timaha.
Endoderm wuxu sameeyaa dahaarka qaabka neefsashada iyo dheefshiid mareenka, waxana ka sameysmo xubnaha ugu waaweyn sida beerka iyo beer-ku-taasha.
Mesoderm wuxu sameeyaa wadnaha, kalyaha, lafaha, carjawda, muruqyada, unugyada dhiigga, iyo qaabab kale.
Usbuuca 3da maskaxdu waxay u qaybsameysaa 3 qayb asaasi ah lagu magacaabo maskax-hore, maskax-dhexe, maskax-gadaale.
Sameysamidda qaababka Neefsashahda iyo dheefshiidka ayaa kaloo socda.
Marka ay unugyadii dhiigga ee u horeeyay ay ka soo baxaan koleyga dheefta, xididdo dhiig ayaa ku sameysmayo dhammaan embriyaha, wadnuhuna ahaan buu ku soo baxaysaa.
Ku dhawaad islamarkiiba, wadnaha dhaqsuu u qorayaa wuu isku duubmaa iyadoo qolal gaara ay bilaabanayaan inay sameysmaan.
Wadnuhu wuxu bilaabayaa garaac 3 usbuuc iyo hal maalin kulanka unugyada labka iyo dheddiga kadib.
Qaabka wareegga dhiigga waa qaabka koowaad ee jirka, ama kooxo xubno wada xiriira, gaara xaal hawlqabad.
Usbuucyada 3da iyo 4ta dhexdooda, qorshaha jirka ayaa soo baxaya madaama maskaxda, xarigga lafdhabarka, iyo wadnaha embriyaha si sahlan loo aqoonsan karaya Iyagoo uu weheliyo koleyga nafaqadu.
Koriimo degdeg ah waxay sababeysaa laablaabmid embriyaha oo illaa-xad fidsanaa. Hawlgalkaan wuxu ku xirayaa qayb kolayga nafaqada dahaarka qaabka dheefshiidka waxayna sameeyneysaa xabadka iyo godadka caloosha ee benii aadamka koraya.
Usbuuca 4ta amniyonka cad ayaa ku wareegsan embriyaha isagoo ku jira koleyga dareeruhu-ka-buuxo. Dereerahan nadiifka ah, waxa lagu magacaabaa dareeraha amniyonka wuxu ka badbaadiyaa embriyaha dhaawac.
Wadnuhu wuxu caadi ahaan garaaca 113 jeer daqiiqadiiba.
Fiiri sida wadnuhu u beddelayo midabka marka dhiiggu galayo ama ka baxayo qolalkiisa garaac walba.
Wadnuhu wuxu garaacayaa taqriiban 54 milyan jeer dhalashada ka hor iyo 3.2 bilyan jeer kabadan nolol 80 sano gaarsiisan gudaheeda.
Maskaxda oo si degdeg ah u korto waxa daliil u ah isbeddelka muuqaalka ee maskaxda-hore, maskaxda-dhexe, maskaxda-gadaale.
Koridda addimada hore iyo dambe waxay ku bilaabataa soo muuqashada addimada bilowgooda usbuuca 4ta.
Maqaarka waa khafiif wax laga dhex arko xilligan waayo dhumucdiisa waa hal unug keliya.
Uu sii adkaanayo, waxa baaba'ayso in wax laga dhex arko, taaso macnaheedu yahay waxan arki kari doonnaa xubnaha gudaha keliya oo koraya ku dhawaad bil kale.
4ta iyo 5ta usbuuc dhexdooda, maskaxdu waxay sii wadeysaa koridda degdegga waxayna u qaybsameysaa 5 qaybood kala duwan.
Madaxu wuxu ka kooban yahay 1/3 ee miisaanka dhan ee embriyaha.
Waxa soo baxaya wareega baka ah ee maskaxda, oo tartiib u noqonaysa qaybaha ugu waaweyne ee maskaxda.
Hawlaha ay ugu dambeyntii ay xukunto wareegga barka ah ee maskaxda waxa ka mida fekerka, waxbarashada, xusuusta, hadalka, aragga, maqalka, dhaqdhaqaaqa iskiiska ah, iyo mashkalo-xallinta.
Qaabka neefsashada gudihiisa, waxa laga helaa jirridda ugu weyn ee bronki-ga midigta iyo bidixda oo ugu dambeyntii ku xiri doona hunguriga cad, ama dhuunta neefta, sanbabada.
U fiirso beerka weyninka badan oo buuxinaya saabka uu ku xigo wadnaha garaacaya.
Kelyaha joogtada ah waxay soo baxaan usbuuca 5ta ah.
Koleyga nafaqada waxa ku jira unugyo hore ee taran lagu magacaabo unugyada wax dhala. Usbuuca 5ta unugyadan bilowga ah waxay u haajiraan xubnaha taranka ku xiga kelyaha.
Sidoo kale usbuuca 5ta, embriyuhu wuxu sameeyaa baabbacooyinka gacmaha, Sameysmidda carjawduna waxay bilaabataa usbuuca 5ta iyo 1/2ks.
Halkan waxan ka aragnaa baabbacada gacanta bidix iyo kala-goyska gacanta usbuuca 5ta iyo 6 maalmood.
Ubuuca 6da wareegaa barka ah ee maskaxda waxay u koraysaa si leh xawli aan u dhigmin qaybaha kale.
Embriyuhu wuxu bilaabaa inuu sameeyo dhaqdhaqaaqyo iska dhaca ama fal ka jawab-celin awtomatik ah. Dhaqdhaqaaqyadaas iyaga Ah waxa loogu baahan yahay si loo dhiirrigeliyo horumarinta dareemayaasha muruqyada
Taabasho afka aaggiisa ah waxay sababeysaa inuu embriyuhu madaxiisa dib-u-ceshado taasoo fal ka jawaab-celin awtomatik ah.
Dhegta dibadda ah waxay bilaabeysaa inay qaab yeelato.
Usbuuca 6da, waxa beerka ka socdo sameysmidda unugga dhiigga halkaas oo haatan laga helo limfosaytis. Noocan ee unugga dhiigga cad wuxu muhiim u yahay horumaridda qaabka isdifaca.
Boggu, muruq aasaasi ah loo isticmaalo neefsashada, wuxu badankiisu sameysmaa usbuuca 6da.
In ah xiidan ayaa haatan u soo fiiqan si ku-meelgaar ah waxay ku fiiqantahay xarigga xuddunta. Hawlgalkan caadiga, waxa lagu magacaabaa sheelo noqoshada jirka noolaha wuxu firaaqo u sameynayaa xubnaha kale oo ka soo baxay caloosha
Usbuuca 6da baabbacooyinka gacantu waxay sameynayaan fidsanaan aad loo dareemeyn.
Mawjadaha-maskaxda waxa ugu horreyntii la duubay usbuuca 6da iyo 2 maalmood.
Ibaha ayaa ka soo baxaa dhinacyada qaarka hore in yar kahor inta ayan ka gaarin jagadooda kama-dambeysta ah dhanka hore ee xabadka.
Usbuuca 6da iyo 1/2ka , xusulladu waa muuqdaan, faruhu waxay bilaabayaan inay kala qaybsamaan, dhaqdhaqaaqa gacantana waa la arki karaa.
Sameysmidda lafaha, lagu magacaabo lafoobid, waxay ka bilaabataa kalxanta, ama lafta qoorta, iyo lafaha qalka sare iyo hoose.
Hingo ayaa la arkay uusbuuca 7da.
Haatan waxa la arki karaa dhaqdhaqaaqa lugaha, oo ay weheliso ka jawaab-celin naxdin ah.
Wadnaha 4-qollaha ah badankiisu uu dhammeystiran yahay. Isku-celecelis, wadnuhu wuxu haatan garaacayaa 167 jeer daqiiqadiiba.
Hawlo koronteed ee wadnaha waxa la duubay usbuuca 7da iyo 1/2ka wuxu muujinayaa qaab mawjadeed u eg kan qaangaarka.
Dheddiga, ukuma-galeennada waa la aqoonsan karaa usbuuca 7da.
Usbuuca 7da iyo ½ ka,shabakadda isha midabka leh ayaa si sahlan loo arkaa baalashana waxay bilaabayaan xilli koritaan degdeg ah.
Faruhu waa kala qaybsan yihiin suulashuna waxay kaga dhegen yihiin salka oo keliya.
Gacmuhu haatan way isu iman karaan, sidoo kale cagahu.
Waxa kaloo jira kala-goysyada jilibka.
Usbuuca 8da maskaxdu aad bay u horumarsan tahay waxayna tahay ku dhawaad miisaanka dhan ee jirka embriyaha barkiis.
Koriimadu waxay ku socotaa xawli xad-dhaaf ah.
Usbuuca 8da, 75% embriyeyaasha waxa ka muuqda awood dheerada ee gacan-midigle. Waxa haray waxay ugu qaybsan yihiin si isle'eg awood dheerada ee gacan-bidxle iyo kala doorbidid la'aan. Tan waa daliisha ugu horreysa ee dhaqan gacan ku midigle ama bidixle ahaansho.
Buugaagta takhtaridda carruurta waxay tilmaamayaan karti "is-gaddin" inay muuqato 10 ama 20 usbuuca dhalashada kadib. Laakiin, isku-duwiddaan cajiibka ah waxay ku muuqataa xilli sii hore bii'adda leh quwad-jiidasho dhul oo hooseysa ee koleyga amniyon-ka dareeruhu-ka-buuxo la'aanshaha awoodda loogu baahan yahay oo kaliya si looga guuleysto quwad-jiidashada dhulka sarreysa ee minka dibeddiisa ayaa ka horistaageysa dhallaanka inuu is-geddiyo.
Embriyuhu wuxu noqonayaa mid sii firficoon jismi ahaan xilligaan gudahiisa.
Dhaqaaqu wuxu noqon karayaa aayar ama dhaqsi, fardi ama soo-noqnoqod, fal iska dhaca ama ka jawab-celin automaatik ah.
Madax warejin, qoor taagid, iyo ku taabasho gacanta wajiga waxay dhacaan marar ka sii badan.
Taabashada embriyaha waxay keeneysaa indho dabid, dhaqdhaqaaq qalka, dhaqaaq qabsasho, iyo suul fiiqid.
Usbuuca 7da iyo 8da dhexdooda, baalalka isha ee kore hoose si dhaqsi ah bay ugu koraan indhaha korkooda dhan ahaan bayna isqabsadaan.
Inkastoo uusan minku lahayn hawo embriyuhu wuxu muujinayaa dhaqaaq neefsasho kala go'aysa usbuuca 8da.
Xilligan, kelyuhu waxay sameynayaan kaadi oo lagu sii deynayo dareeraha amniyon-ka.
Embriyaha labka ah, xiniinyaha koraya waxay bilaabayaan inay sameeyaan siina-daayan testosteroon.
Lafaha, kala-goysyada, muruqyada, dareemeyaasha, iyo xididdada dhiigga ee addimmada waxay aad ugu eg-yihiin kuwa qaangaarka.
Usbuuca 8da epidermis, ama maqaarka sare, wuxu noqonayaa xuub lakbyo badan, oo lumiya khafiifnimadiisa layska arkayo badankeeda.
Sunniyadu waxay soo baxaan islamarka ay timo ka soo muuqanayaan afka wareeggiisa.
Siddeeda usbuuca ah wuxu calaamad u tahay dhammaadka xilligii embriyaha.
Waqtigaan gudihiisa, embriyaha benii aadamku wuxu koray min hal unug illaa ku dhawaad 1 bilyan unugyo oo sameeya 4,000 qaab dhisme-jireed kala duwan.
Embriyuhu wuxu haatan leeyahay ka badan 90% qaabab laga helo qaangaarka.
Unugyo dhadhamo kala duwan ayaa ku yaal afka gudihiisa haatan. Goorta dhashada unugyada dhadhamadu waxay ku hari doonaan oo keliya carrabka iyo dhanxanagga.